ဒီရက်ပိုင်းဘလော့ဂ်တော်တော်များများမှာ သရဲအကြောင်းတွေဖတ်ရပါတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့ အကြုံတွေ, ကြားဖူးနားဝရှိတာတွေ, သရဲအစစ်တွေ, သရဲအတုတွေ စုံလို့ပါပဲ၊ ဝီစကီသောက် တဲ့ သရဲနဲ့ ဝက်ခြံဗရဗျစ်နဲ့သရဲတောင် ပါလိုက်သေးတယ်၊ ဟယ်လိုဝင်းပွဲတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီး ဘလော့ဂါတွေရဲ့ စင်္ကြန်မှာ သရဲတွေလမ်းသလားချိန်ပေါ့၊ အဲဒီ လျှောက်ပြန်သံပေး လုပ်နေတဲ့ထဲက တစ်ကောင်က ကျနော့်ကိုများဝင်ပူးသွားလား မသိဘူး... ကျနော့်ရဲ့ လက်တွေဟာ နတ်ဝင်သည် လို တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး တခါတုန်းက ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့သရဲတစ်ကောင် အကြောင်းကို ချရေးဖြစ်ပါ တော့တယ်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ (၆)နှစ်လောက်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကိုပြန်တွေးတိုင်း ဒီနေ့အထိနားမလည်နိုင်သေးပါဘူး၊ အားလုံးရဲ့အမြင်မှာတော့ ကျနော်သရဲခြောက်ခံလိုက်ရတာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုမယူဆချင်ပါဘူး၊ ဒါဖြင့် သရဲခြောက်ခံရတာမဟုတ်ရင်ဘာလဲလို့ တစုံတယောက်ကမေးလာခဲ့မယ်ဆိုပါစို့၊ ကျနော့်မှာအဖြေမရှိပါဘူး၊ ဇဝေဇဝါနဲ့အတော်ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ၊
အဲဒီကာလတွေတုန်းက ကျနော်ကအလုပ်တာဝန်နဲ့မကြာခဏ ခရီးထွက်ရပါတယ်၊ မြို့ တော်တော်များများကို လှည့်ပတ်သွားလာရတဲ့ကျနော်ဟာ ဟိုတယ်, တည်းခိုခန်း အတော်များများ မှာတည်းခိုဖူးပါတယ်၊ အများအားဖြင့် အားလုံးနီးပါးက သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းမွန်ပြီး အဆင်ပြေပါ တယ်၊ ကျနော့်အတွက်က အိပ်ရာအပြင်အဆင် သန့်ပြန့်ရင်ပြီးတာပါပဲ၊ ဟိုဟာဖြစ်မှ, ဒီဟာဖြစ်မှ ရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော့်အဖေကတော့ မကြာခဏမှာလေ့ရှိပါတယ်၊
“ မင်း ဟိုတယ်တွေ ရောက်လို့အိပ်ရင် ဘုရားရှိခိုး, ဆုတောင်းပြီးမှအိပ်ကွ၊ အခန်းထဲမှာ ကိုယ့် အရင်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေ တည်းသွားမှန်း သိနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ” တဲ့၊
အဖေ့ကို ကျနော်ချစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဖေ့စကားကို မြေဝယ်မကျတော့နားမထောင်ဖြစ် ပါဘူး၊ မေ့သွားရတာနဲ့, အလုပ်ပင်ပန်းရတာနဲ့, စာဖတ်ရင်းနဲ့ငိုက်သွားရတာနဲ့ ကျနော့်အတွက် ဘုရားရှိခိုး ပြီးမှအိပ်ရာဝင်တဲ့ ညတွေက နည်းပါးလွန်းပါတယ်၊
ဒီလိုနဲ့တခါမှာတော့ ပုဂံမြို့ရဲ့ နာမည်ကြီးဟိုတယ်တစ်ခုကို ကျနော်ရောက်လာပါတယ်၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့အဲဒီမှာ (၂) ည တည်းခိုဖို့ပါ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းသဘောအရ မိုးလင်းကတဲက ထွက်လိုက်တာ ဟိုတယ်ကိုညမိုးချုပ်, ညစာ စားပြီးမှပြန်ရောက်လေ့ ရှိပါတယ်၊ ရောက်ရင်လည်း သိပ်မကြာခင်မှာ အိပ်ရာဝင်ဖြစ်ပါတယ်၊ အမြဲလိုလို နွမ်းနယ်နေတတ်တော့ စာဖတ်ရင်တောင် သိပ် ကြာကြာမဖတ်နိုင်ပါဘူး၊ အဲဒီဟိုတယ်မှာ ကျနော်မကြာခဏတည်းဖူးပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာလိုပဲ သက်တောင့်သက်သာနဲ့နေရတာအဆင်ပြေပါတယ်၊ ပထမညမှာ ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်၊ မိုးလင်းတော့ ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ နိုးလာပြီး ဒုတိယတစ်ရက်တာ အလုပ်စ, ပါတယ်၊
အဲဒီ ဒုတိယနေ့မှာ တစ်နေ့တာ, တာဝန်ပြီးလို့ ညပိုင်းမှာ ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်လာပါ တယ်၊ ည (၉) နာရီခွဲလောက်တော့ ရှိပါပြီ၊ ဟိုတယ် ဧည့်ကြိုမှာ ရင်းနှီးနေတဲ့ ဝန်ထမ်း
ကောင်မလေးကို နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်ကတောင် ကျနော့်အသိတွေထဲက ဟိုတယ်မှာ လက်ရှိဘယ်သူတည်းနေသလဲ လို့မေးလိုက်ပါသေးတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်... ကျနော်တို့လုပ်ငန်းတူ သူငယ်ချင်းတွေက ခရီးသွားရင်း တည်းခိုခန်းတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ဆုံတတ်ကြပါတယ်၊ အဲဒီ ညမှာတော့ ဧည့်သည်သိပ် မများကြောင်းနဲ့, ကျနော်သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ သူတွေသာရှိကြောင်း ကောင်မလေးက ပြန်ဖြေပါတယ်၊
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ကိုယ့်အခန်းရှိရာ လာခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်အထိ ကျနော့်ဘဝမှာ မေ့ပျောက်လို့မရနိုင်မယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခု အဲဒီည, အဲဒီအခန်းထဲမှာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားမိပါဘူး၊ အခန်းထဲရောက်တော့ အဝတ်အစားလဲ, နောက်တစ်နေ့ က ဟိုတယ်ကထွက်မယ့်နေ့ဖြစ်လို့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းပါတယ်၊ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး စာတစ်ပိုဒ် လောက်ဖတ်ဖို့ ပြင်ရင်း စီးကရက်ကို မီးညှိပါတယ်၊
တကယ်တော့ အခန်းထဲမှာ ဆေးလိပ်မသောက်သင့်မှန်း ကျနော်သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အပြင်ထွက်ရမှာ ပျင်းတာရယ်, စာဖတ်ရင်းနဲ့သောက်ချင်တာရယ်ကြောင့် ကျနော်အခန်းထဲမှာပဲ သောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်၊ ခဏအကြာမှာ ဆေးလိပ်ကို ကုတင်ဘေးက စားပွဲပုလေးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ပြာခွက်ထဲမှာ ထိုးချေရင်း ကျနော် မီးပိတ်, အိပ်ရာဝင်လိုက်ပါတော့တယ်၊ အဲဒီ ဒုတိယညမှာ လည်း ကျနော် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ပါတယ်၊ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ၊ မိုးလင်းလာတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ထထိုင်လိုက်ရင်း ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ဆေးလိပ်ပြာခွက်ဆီ အကြည့်ကရောက်သွားပါ တယ်၊ အဲဒီမှာ ကျနော်အရမ်း အံ့သြသွားပါတယ်၊ ပြာခွက်ထဲမှာ ဆေးလိပ်ပြာရော, စီးကရက်အစီခံ တွေရော တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး၊ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်? ညကပဲ မှတ်မှတ်ရရ ငါစီးကရက်တစ်လိပ် သောက်သေးတာပဲ၊
ဆေးလိပ်ပြာခွက်က ဖန်အကြည်သားနဲ့လုပ်ထားတာပါ၊ ပြာရော, အစီခံတွေရော မရှိတဲ့ အပြင်သေသေချာချာ ရေနဲ့ဆေးကြောထားသလိုပြာခွက်ကလေးက သန့်ရှင်းလို့..... ကျနော့် စိတ်ထဲမှာလည်း ထင့်ကနဲဖြစ်သွားပါတယ်၊ ဒါနဲ့ ဘေးဘီလည်းကြည့်လိုက်ရော ကုတင်ပေါ်က ထ, ခုန်မိမတတ် ကျနော်ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားပါတော့တယ်၊ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ဘယ်လိုမှယုံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး၊ ဆေးလိပ်ပြာတွေနဲ့ စီးကရက်အစီခံတွေက ကျနော့်ကုတင်ပေါ်, ခြေရင်းဖက်မှာ ပုံလျက် သားကလေးပါ၊ ကျနော်လည်း လန့်ဖြန့်ပြီးကုတင်ပေါ်ကခုန်ဆင်း, အခန်းအလယ်ခေါင်မှာ မတ်တပ်ရပ်မိလျက်သား ဖြစ်သွားပါတော့တယ်၊ အဲဒီနေရာကနေ ကျနော့်ကုတင်ခြေရင်းဖက်က ဆေးလိပ်ပြာတွေနဲ့ အစီခံတွေကို ကြက်သေ, သေရင်းကြည့်နေမိပါတယ်၊ တပြိုင်တည်း ကြက်သီး မွေးညှင်းတွေထ, လာပြီး ချွေးစေးတွေလည်း ပြန်လာပါတယ်၊ လုံးဝ မျှော်လင့်မထားတော့ ကျနော် လည်းတော်တော်လေး တုန်လှုပ်သွားပြီး “ ကျနော် သရဲအခြောက်ခံရပါပြီဗျို့ ” လို့ အော်ဟစ်ပြီး အပြင်ကို ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးမိတော့မလို ဖြစ်သွားပါတယ်၊ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ မနက်ခင်းမှာ ကျနော့်နှလုံးခုန်သံကို ကျနော်ပြန်ကြား နေရပါတယ်၊
အဲဒီအချိန် စိတ်ကိုမနည်း ပြန်တင်းယူရပါတယ်၊ ... ငြိမ်ငြိ်မ်ထားစမ်း... မင်းစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ် ထားစမ်း၊..... ဘာမှမဖြစ်ဘူး... ဘာမှမရှိဘူး၊ အခုမိုးလင်းနေပြီ..... အပြင်မှာလူတွေသွားလာနေပြီ၊ အခန်းထဲမှာလည်း နေရောင်တွေလင်းလို့...... ဟုတ်ပြီ... အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူ..... အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူ..... ဟုတ်လာပြီ၊ ဟုတ်လာပြီ..... စိတ်ကို စုထား.................
အတန်ငယ်စိတ်သက်သာရာရမှ အခန်းထဲကို မျက်လုံးကစားကြည့်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းအားလုံး ပုံမှန်ပါပဲ၊ ဘာမှခြေရာလက်ရာ မပျက်ပါဘူး၊ ကျနော့်ရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ကလည်း မနေ့ညက အတိုင်း ထုပ်ပိုးထားလျက်၊ တခန်းလုံးကမနေ့ညက အိပ်ရာမဝင်မီက အတိုင်းပါပဲ၊ ကွဲပြားနေတာဆိုလို့ သေသေချာချာ ဆေးကြောထားတဲ့ ဖန်အကြည်ဆေးလိပ်ပြာခွက် ကလေးရယ်, ကုတင်ခြေရင်း အိပ်ရာခင်း ဖြူဖြူပေါ်မှာ သေသေချာချာပုံထားတဲ့ ပြာတွေနဲ့ စီးကရက်အစီခံ (၃) ခုရယ်၊ (၂) ခုကကျနော်ပထမနေ့က သောက်ထားတာ, တစ်ခုက မနေ့ညကဟာ.........
ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? ဒါဟာသရဲခြောက်တာလား? အခန်းရဲ့အလယ်ခေါင်မှာ ရပ်လျက်သား နဲ့ကျနော်အပြင်းအထန် အဖြေရှာကြည့်ပါတယ်၊ မအိပ်ခင်ဘာတွေထူးခြားသေးလဲ? စဉ်းစားစမ်း၊ ဥပမာ-ခွေးတွေအူနေသလား? မအူပါ၊ ဘာခွေးအူသံ, ခွေးဟောင်သံမှ ကျနော်မကြားခဲ့ပါဘူး၊ မနေ့ညက လပြည့်ညလား, ဒါမှမဟုတ် လကွယ်ညလား? မဟုတ်ပါ၊ သာမန်လဆန်းရက် တစ်ရက်ပါပဲ၊ ဒါဖြင့် ထူးထူးခြားခြား တိတ်ဆိတ်နေတာမျိုးရှိလား? အင်း, ဒါတော့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီဟိုတယ်ဟာ ဒီလိုပဲ အမြဲတိတ်ဆိတ် အေးချမ်းနေတတ်တာပဲ၊ မနေ့ညကမှ ထူးပြီး ပိုတိတ်မနေပါဘူး၊ လေမတိုက်ဘဲ ခန်းဆီးလှုပ်သွားတာမျိုးတွေရော ရှိလား? မရှိပါ၊ ကျနော်က ပြတင်းတံခါးကို အသေပိတ်ထားပြီး လေအေးစက်ဖွင့်ထားသောကြောင့် ဘာခန်းဆီးမှ မလှုပ်ပါ၊
ဒီလိုနဲ့ ဒါသရဲခြောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တွေးလိုက်ပါတယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါ, သရဲ ခြောက်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူး၊ ဒါ, သာမန်အဖြစ်အပျက်ပဲ၊ ကဲ....ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီသာမန် အဖြစ်အပျက်ကဘယ်လိုဖြစ်ပျက်သွားတာလဲ? ဒီတော့တခါ ကျနော်သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်ပါတယ်၊ ညတုန်းက ငါ့ဟာငါအိပ်မက်ထဲမှာ ယောင်ပြီးလမ်းထလျှောက်ရင်း သွန်မိတာများ လား? မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ကျနော့်မှာ အိပ်နေစဉ်ယောင်ယမ်းပြီး ထ, လမ်းလျှောက်တဲ့အလေ့ မရှိပါဘူး၊ မိဘ သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကျနော်အဲဒါမျိုးလုပ်တတ်တယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မပြောဖူးပါဘူး၊ ဒါဖြင့် လေအေးစက်အရှိန်ကြောင့် လွင့်သွားတာများလား? ဒါလည်းမဟုတ်နိုင်ပါဘူး၊ လေအေးစက်
က ကုတင်ခေါင်းရင်းမှာမဟုတ်ပါ၊ အခန်းရဲ့ဟိုးတဖက်ခြမ်း နံရံမှာ ကုတင်နဲ့အပြိုင်ရှိတာပါ၊ ပြီးတော့ စက်ကဖွင့်တယ်ဆိုရုံလေး ဖွင့်ထားပြီး လေထွက်ပေါက်ကလည်း အောက်ကိုစိုက်ထားတာ ပါ၊
ပြီးတော့ ပြာတွေကလေတိုက်လို့ပြန့်ကျဲနေပုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ သေသေချာချာပုံပြီးမှ အပေါ်ကနေ စီးကရက်အစီခံ (၃) ခုစိုက်ထားတဲ့ပုံစံပါ၊ နောက်တခု ထူးဆန်းတာက တညလုံးလုံး ကျနော်အိပ်ခဲ့တာတောင် ကျနော့်ခြေထောက်နဲ့ ပြာတွေ မတော်တဆ မထိမိခြင်းပါပဲ၊ ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့ မရတာနဲ့ ကျနော်လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်၊ တနေ့တာအတွက် ပြင်ဆင်ရမှာ ကလည်းရှိသေးတယ်၊ ရေမချိုးခင်မှာ “ အင်း..... ဒီပြာတွေတော့ရှင်းပစ်ခဲ့မှပါပဲ၊ တော်ကြာဟိုတယ် က ငါ့ကို အိပ်ရာပေါ်ပြာသွန်ရလောက်တဲ့အထိ စိတ်မနှံ့ဘူးထင်သွားမှဖြင့်.... ” လို့တွေးမိပြီး ပြာတွေနဲ့ အစီခံတွေကို အူကြောင်ကြောင်နဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲသွန်လိုက်ရပါတယ်၊
ဒီအကြောင်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖြစ်ပါဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ရက်ပေါင်း (၂၀) လောက်အကြာမှာ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်၊ စကားစမြည်ပြောကြတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုရောက်လိုက်, ဒီရောက်လိုက်နဲ့ လူစုံ, အကြောင်းစုံပါပဲ၊ အဲဒီမှာ ကျနော်လည်း ကျနော့် အကြောင်းပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်၊
“ မင်းတို့ကို ငါကြုံခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခု ပြောပြမယ်..... ”
အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျနော့်အပေါ်ရောက်လာကြတယ်၊ ပြီးတော့ ကျနော် ပြောတာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ နားထောင်နေကြတယ်၊ ကျနော့်စကားလည်းဆုံးရော ဆန်းထွန်းက မေးလိုက်ပါတယ်၊
“ အဲဒီအခန်း နံပါတ်က ........ မဟုတ်လား? ”
ကျနော်အံ့သြသွားတယ်၊ ဒီကောင်ဘယ်လိုသိတာပါလိမ့်?၊ တပြိုင်နက်ထဲမှာ ကျနော်တစုံတခုကို ဆက်စပ်တွေးမိသွားတယ်၊ ဆန်းထွန်းနဲ့ ကျနော်နဲ့က ခရီးမှာ မကြာခဏ ဆုံဖူးပါတယ်၊ ပုဂံက အဲဒီဟိုတယ်မှာလည်း တခါဆုံပါတယ်၊ ဒီတုန်းက “ ငါ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းလို့ကွ ” ဆိုပြီး သူ, ကျနော့်အခန်းထဲ လာအိပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြားရတာ
က သူ အဲဒီဟိုတယ်ရောက်တိုင်း အဖော် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အခန်းမျှနေဖို့ ကြိုးစားတယ်တဲ့၊ ကျနော်တို့တောင် ရယ်ဖြစ်ကြပါသေးတယ်၊ ကျနော်တို့ထဲမှာ ဆန်းထွန်းက အလွန်သရဲကြောက် တတ်သူပါ၊ ကြည့်စမ်း..... ဒါဖြင့် ဒီကောင် ဒီအခန်းအကြောင်းသိနေတာပေါ့၊ ငါ့ကိုတောင် ကြိုမပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းပဲ ကျနော်ပြန်တွေးမိသွားတယ်၊ အဲ.... နေဦး, ငါကြိုသိထားရင် ဘာမှ မဟုတ်ခင်ကတည်းက ကြိုပြီး ကြောက်နေရဦးမယ်၊ အခုလိုကမှ တော်သေးတယ်၊ ကျနော် အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်နေတုန်း........ ဆန်းထွန်းက ဆက်ပြောပါတယ်၊
“ အဲဒီ အခန်းက နာမည်ကြီးတယ်ကွ ” တဲ့၊
ဒီ့နောက်မှာတော့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဝေဖန်သံတွေ, ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ, ကောက်ချက်ဆွဲသံတွေနဲ့ ဆူညံနေပါတော့တယ်၊ သူတို့အားလုံး လိုလိုကတော့ ကျနော် သရဲခြောက်ခံလိုက်ရတယ် လို့တညီတညွတ်ထဲ ပြောကြပါတယ်၊ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလို ခံယူ လိုက်ဖို့ ဝန်လေးနေတုန်းပါပဲ၊ တကယ်တော့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ သရဲခြောက်တယ် ဆိုတာ ခန်းဆီးစ လှုပ်တာတို့, တံခါးလာခေါက်တာတို့, ရေဘုံဘိုင် သူ့အလိုလိုပွင့်တာတို့, အိပ်နေတုန်း စောင်တွေ လာဆွဲချတာတို့, မီးတွေ ပိတ်လိုက်, ဖွင့်လိုက်ဆော့တာတို့ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားမိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် သရဲဆိုတာ သူခြောက်ချင်သလို ခြောက်မှာပေါ့၊ ဘယ်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းမှ လိုက်နာနေစရာမလိုပါဘူး၊ သရဲတွေဆီမှာလည်း ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့ ခြောက်, ဒီကွေ့ဒီတက်နဲ့ခြောက် ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိချင်ရှိနေမှာပါပဲ၊ သူစိတ်ကူးရတဲ့ အတိုင်းပေါ့၊ ကျနော်ကသာ သရဲကို ပုံစံခွက်ထဲသွင်းဖို့ ကြိုးစားနေမိတာ၊ တကယ်တော့ သရဲက ကျနော်ဖတ်ဖို့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှ မဟုတ်ဘဲ၊
ဒါနဲ့ ကျနော် သရဲအခြောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျနော့် ကိုခြောက်တဲ့ သရဲဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်လာပြန်ရော၊ ပုဂံမြို့မှာဆိုတော့ ဧကန္တ ပုဂံခေတ် က မကျွတ်ဘဲ ကျန်နေတဲ့ သရဲတစ်ကောင်များလား? ဒါဆိုရင်တော့ သူ စီးကရက်ဆိုတာ သိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် ကျနော့်ဆေးလိပ်တိုတွေနဲ့ လာဆော့တာနေမှာ၊ အင်း-သရဲဟာ လူ့ဘဝတုန်း က အခန်းသန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းလည်း ဖြစ်နေနိုင်တာပဲ၊ ဒါ့ကြောင့် ဆေးလိပ်တိုတွေကို လွှင့်ပစ်တာနေမှာ၊ ဒီအတွေးကိုချက်ချင်းပဲ ကျနော်စောဒက တက်မိပါတယ်၊ ဟင်-ဒါဆိုရင် အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်ရမှာပေါ့၊ အခုတော့ စည်းမရှိ, ကမ်းမရှိနဲ့၊ ဒါပေမယ့် တဆက်ထဲမှာ သရဲက ကျနော့်ကို လာခြောက်နေတာ, ကျနော့်အခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလာလုပ်ပေးနေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိသွားပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်..... အမှိုက်ပုံးထဲဆိုရင် ကျနော်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါဆိုရင်သူ့ အတွက်ပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ရာပေါ်ပုံတာပဲနေမှာ၊ နေပါဦး, အဲဒီသရဲဟာ ကျနော့်ကို ဆေးလိပ်မသောက်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့လုပ်တာများလား? ဥပမာ-သူဟာလူ့ဘဝတုန်း ကဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့သူတဦးဦး ဆိုရင်ပေါ့၊ ဒါဆိုရင် အဲဒီညတုန်းက သရဲက ဘာတွေများစဉ်းစားနေမှာပါလိမ့်၊ “ အင်း..... ဒီကောင်လေး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကိုယ့် အဆုတ်ကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးနေတာပဲ ” လို့များ ကရုဏာဒေါသနဲ့ ကျနော့်ကို ငုံ့ကြည့်နေမှာလား? အမလေး..... အဲဒီမြင်ကွင်းကို မြင်ယောင်ကြည့်တော့ ကျောထဲကအေးကနဲ စိမ့်သွားပြီး ကျနော် လန့်သွားပါတယ်၊ ဒါနဲ့ အဲဒီအတွေးတွေကို ရပ်ပြီး ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ဖို့ ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်၊
အခုတော့လည်းကြာခဲ့ပါပြီလေ၊ ကျနော်လည်း ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာ အတော်ကြာသွားပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်ပြာတွေ, အစီခံတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ပြာခွက်တွေကို အမှတ်မထင် မြင်တိုင်း ကျနော့်ဆေးလိပ်ပြာတွေကို သူ့သဘောနဲ့သူ သွန်သွားတဲ့ တခါတုန်းက သရဲတစ်ကောင်ကို ရံဖန်ရံခါ သတိရနေတုန်းပါပဲ။ ။
၄ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by ညီလင်းသစ် au 6.11.07
အဲလိုအဖြစ်မျိုး မသေခင် ကိုယ်ကိုတိုင် ကြုံဖူးချင်တယ်ရှင်။
ရှာနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ ခုလိုကိုယ်တွေ့ကို ဖတ်ရတာ တစ်စုံတစ်ရာအတွက် မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရလိုက်တာပါပဲ။
ညီလင်းရေ.. အဲဒါ ဧရာဟိုတယ်ဆိုရင်တော့ အမလည်း သရဲအခြောက်ခံရသလို တခါကြုံဖူးသား။ ဒါမဲ့ အဲလောက်တော့ မသေချာ။ ဟီ.. ခု ဖတ်ရင်း ကြက်သီးတွေ ထလာသေး။
ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖတ်သွားတယ်...
ရေးထားတာ ပီပြင်တော့ ပိုကြောက်မိတယ်
မလေးက ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးချင်တယ် တဲ့... :-(
ပြန်ခါနီး မို့လို့တော်သေးတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် အကို အခန်းပြောင်းပြေးမှာ မှတ်လား? :D
တယောက်တည်းရှိနေတုန်း ကွန်ပျူတာနှိပ်သံကြားလို့ လှည့်ကြည့်..အခန်းထဲမှာ ကိုယ်တယောက်တည်း..ပရောဂျက်မပြီးသေးလို့ကုန်းရေးနေတာ..မေသူလေး ပြန်လာတော့မှ အမ ဒီအခန်းထဲမှာ တယောက်တည်းနေတယ် ဆိုတော့မှ သဘောပေါက်တယ်..သရဲကတော့ စိတ်ညစ်သွားမယ်..ခြောက်လို့ ခြောက်မှန်းမသိတဲ့ ငတိမလေး..နောင်များဆို အဲဒီအခန်းကို ယောင်လို့ တောင် မသွားတော့ဘူး..ဟဲ..ဟဲ အဲဒီလို သတ္တိခဲ...
ဒီအထိ ပြန်လာဖတ် သွားတယ် အကိုရေ
ညီမ blackroze ( ပစ်ပစ် )
ကြုံဖူးဘူး....သိတော့သိချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းတော့ သိချင်ဘူး
မလေးနဲ့ သွားရင်ကောင်းမယ်.. :D :D
ညီမ ရွှေအိမ်စည်က တကယ့် သတ္တိခဲပဲကိုး...၊းD